Warshadda Xakamaynta Caabuqa | Soosaarayaasha iyo Shirkadaha Xakamaynta Cudurka Shiinaha
Tamarta Sare ee Caafimaadka ...
Waxyaabaha Tilmaamay: ■ Saddex raajo (6MV, 10MV iyo 15MV) iyo elektaroonig badan ...
Albaabka Tooska ah ee Buufiyo Mashiinka
Qaababka Wax soosaarka ■ Naqshadeynta qolka qaab-dhismeedka iyo geeddi-socodka Qolka shaashadda ee S ...
Endoscop debecsan oo otomaatig ah ...
Waxtarka sare dhaqida Rider taxane mashiinka endoscope si toos ah u dhameysan karo th ...
XH507 Qaybta Ilkaha
Astaamaha lamp Iftiinka Afka Heerkulka midabka waa la hagaajin karaa wuxuuna leeyahay laba illumi ...
Taxanaha RXY Wash-jeermiska-F ...
Guudmarka faahfaahinta Vial: 1ml-100ml Awoodda wax soo saarka: 10-500 fijaan / daqiiqad F ...
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Ultr ...
Mashiinka bakteeriyada miiskiisa ugu badan-T (...
Astaamaha cleaning Nadiifinta ku habboon Nooca haanta biyaha ee nooca furan leh dabool la saari karo ...
YKX.P Caafimaadka Plasma Air Pu ...
Astaamaha design Naqshadeynta qaybsan ayaa dayactirka aad uga fudud. Xulashada xawaaraha 3-darajada ah ...
Sifeeyaha Hawada ee YKX.Z Ultraviolet
Mabda'a shaqada: Iftiinka UV + shaandhada. Iftiinka UV wuxuu baabi'in doonaa borotiinka sheyga ...
WAS Taxanaha Ampoule Water St ...
Guudmarka Maaddaama ay tahay xarunta kaliya ee qaran ee R&D ee jeermiska dila iyo jeermiska ...
Hordhaca Wax soo saarka BDS-H taxane ah faafitaanka hydrogen peroxide disinfecto ...
Noocyadu waxay bixiyaan xalal kala duwan oo wax soo saar ah oo loogu talagalay xayawaanka waaweyn, waxayna abuuri karaan ...
Kala soocida bacda jilicsan
Hordhaca sheyga BSE-IS jiir taxane ah iyo jiir kalluumeysiga jilicsan ee jilicsan ayaa ah nooc ...
Kala soocida digaaga
Hordhaca sheyga Kala soocida digaaga BSE-l saxan iyo taban ...
BWS-M-G360 drinki otomaatig ah ...
Biyaha nadiifka ah ee lagu daaweeyay shaybaarka xoolaha ka cabaya biyo nadiifinta
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Buufiyo
Rapid-M-320 waa qalab gacan-dhaqe ah oo lagu nadiifiyo jeermiska-wax lagu baaro laguna baaro iyadoo la raacayo shuruudaha cosbitaalada yaryar ama xarumaha. Shaqadeeda iyo dhaqashadeeda wax ku oolka ah waxay la mid tahay Rapid-A-520. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa jeermiska aaladaha qalliinka, alaabada, baakadaha caafimaadka iyo taarikada, qalabka suuxdinta iyo tuubbooyinka jiingado ee isbitaalka CSSD ama qolka qalliinka.
Dhaqeyaasha Cadaadiska xun
Nidaamka Korjoogteynta SHINVA ee Saamaynta Maydhashada Nalalka
Method Habka tijaabada waxtarka
Faakiyuumka wasakhda ah ayaa ka duwan kan lagu buufiyo, waxay qaadataa mabda'a shaqada cusub si loo xalliyo dhammaan noocyada qalabka qalafsan ee ka muuqda jeexdin badan, qalab iyo lumen. Si loo helo aqoonsi cilmiyaysan oo ku saabsan saamaynta maydhashada, SHINVA waxay soo bandhigaysaa xalalka gaarka ah ee la socodka saamaynta dhaqashada iyadoo loo eegayo astaamaha:
Ballaaran jeermiska-jeermiska-wax lagu nadiifiyo waa 1200mm oo keliya kaasoo bixiya rakibo habboon oo kan ugu fog wuxuu yareeyaa kharashyada iyo waqtiga rakibidda.
Taxane DXQ multifunction hayaya dhaqe-jeermiska waxaa si gaar ah loogu talagalay alaabta lager ee isbitaalka sida sariirta bukaanka, gaari iyo hayayaashii, weelka iwm Waxay leedahay faa'iidooyinka awoodda ballaaran, nadiifinta dhamaystiran iyo otomaatiga heer-sare ah. Waxay dhameystiri kartaa nidaamka oo dhan oo ay ku jiraan dhaqidda, raaci, jeermiska, qalajinta iwm.
DXQ taxane multifunction hayaya dhaqe-jeermiska waxaa loo isticmaali karaa in caafimaadka iyo caafimaadka ama shaybaarka xoolaha si aad u dhaqdo oo jeermiska looga qaado waxyaabaha ku habboon oo ay ku jiraan nooc kasta oo tarooli, dambiilo caag ah, weelka nadiifinta iyo daboolkiisa, miiska qalliinka iyo kabaha qalliinka, baqashada shaybaarka xoolaha, iwm
Nadiifiyeyaasha Xiinka Bilaashka ah
QX taxane maydhashada ultrasonic waa mashiinka dharka lagu dhaqo ee CSSD, qolka qalliinka iyo shaybaarka.SHINVA waxay siisaa xalal isku dhafan oo xalal ah oo ay ka mid yihiin dhaqangalka hordhaca ah, dhaqitaanka labaad iyo qoto dheer ee kaladuwan.
Shaxda Top Ultrasonic Maydhayaasha
Mashiinka yar-yar ee ultrasonic wuxuu adeegsadaa astaamaha oscillation-ka sare ee soo noqnoqda, kaasoo ay soo dirto koronto-dhaliye ultrasonic, wuxuu u beddelaa calaamadda oscillation farsamoyaqaanka sare wuxuuna ku faafaa qalabka dhexdhexaadka ah ee ultrasonic. Xiinka ultrasonic wuxuu horay ugu fidaa xalka nadiifinta si loo soo saaro malaayiin goobooyin yaryar ah. Xumbadaas waxaa lagu soo saaray aagga cadaadiska xun ee gudbinta tooska ah ee ultrasonic iyadoo si deg deg ah ugu faafaya aagga cadaadiska wanaagsan. Nidaamkan loo yaqaan 'Cavitation' Inta lagu gudajiro soo bixitaanka xumbada, cadaadis sare oo degdeg ah ayaa la soo saaraa wuxuuna saameyn ku yeeshaa qodobbada si loo buuxiyo wasakhda lagu dhejiyay dusha sare iyo farqiga u dhexeeya qodobbada si loo gaaro ujeeddo nadiifin.
Si loo xaqiijiyo saameynta jeermiska, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo qallajinta walxaha la adkeeyay. YGZ golaha qalajinta caafimaadka ayaa loo sameeyay si loo daboolo baahiyaha qalajinta dhabta ah ee loogu talagalay walxaha kala duwan ee isbitaalada. Wax soo saarku waa qurux muuqaal ahaan, dhammaystir ahaan shaqeynayaan, hawlgal fudud. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa isbitaalka CSSD, qolalka qalliinka iyo waaxaha kale.
YGZ-1600, YGZ-2000 Taxanaha
Khaanadda wax lagu keydiyo
Noocyada wax soo saarka ee Xarunta-HGZ
Screen Shaashadda xakamaynta taabashada midabka oo ah 5.7-inji.
■ Abuuritaanka rugta isku-dhafan, nadiif ah oo fudud oo aan lahayn bakteeriyada haraaga.
Door Albaabka muraayadaha laga shubay, si fudud loo ilaaliyo xaaladaha gudaha qolka.
Password Qufulka furaha elektromagnetic-ka sirta ah, aamin ah laguna kalsoonaan karo.
System Nidaamka keydinta Rotary sudhan ee endoscopes.
Afarta lakab ayaa dhigaya nidaamka barroosinka, dhammaan hareeraha ka hortagga endoscopes.
■ Iftiimiyaha iftiinka qabow ee LED, aamin ah oo lagu kalsoonaan karo, aan lahayn kuleyl soo saara.
Nooca saxanka kaydinta nooca
Qalajinta iyo keydinta saxda ah ee endoscope waa muhiim. qayb ka mid ah habka loo yaqaan 'endoscope dhaqida iyo jeermiska jeermiska, taas oo si toos ah ula xiriirta endoskop iyo badbaadada bukaanka